Umzi-mveliso wokuBhekisa: Qalisa kwaye usebenze ngokwakho Inkqubo yokuThengisa | Martech Zone
Umzi-mveliso wokuBhekisa: Qalisa kwaye usebenze ngokwakho Inkqubo yokuThengisa
NgoMvulo, Matshi 22, 2021 NgoMvulo, Matshi 22, 2021 Douglas Karr
Naliphi na ishishini elinentengiso encinci kunye nohlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa luya kukuxelela ukuba ukuhanjiswa lelona jelo labo linengeniso yokufumana abathengi abatsha. Ndiyakuthanda ukuthunyelwa kuba amashishini endikhe ndasebenza ndiwaqonda amandla am kwaye ndiyawazi kunye noogxa babo bafuna uncedo endinokubonelela ngalo. Ungayichazanga eyokuba umntu ondithumelayo sele ethembekile kwaye ingcebiso yabo ithwala ubunzima beetoni. Akumangalisi ukuba abathengi abathethayo bathenge kwangoko, bachithe ngaphezulu, kwaye babhekise kwabanye abahlobo:
92% yabathengi ukuthunyelwa kwetrust ebantwini ababaziyo.
Abantu bane-4x kunokwenzeka ukuba uthenge xa ithunyelwe ngumhlobo.
Izikhokelo zokudlulisa zinakho yehlisa iindleko zakho ngokuthenga ngakunye ukuya kuthi ga kwi-34%
Ubunzima, ewe, yindlela yokulandela umkhondo wabo bathunyelwe kuguquko. Kwilizwe lethu le-Intanethi, ukuhanjiswa kunokulandelwa kusetyenziswa ikhonkco elahlukileyo. Ukuba nenkqubo ehambisa ezo makhonkco kunye nokulandela umkhondo ngamnye wokudluliselwa.
Isixhobo sokuhambisa liqonga lokuthengisa elidlulisayo elinikezela inkampani yakho ngenkonzo yokuzenzela, elula, kunye nesisombululo sokuhambisa esipheleleyo:
Sukuba nexhala malunga nokusayina kunye nokuba uyile kwaye wakhe elinye iqonga. Isixhobo sokuhambisa iza namakhulu okwakhiwa okwenziwe kwangaphambili, okulungiselelwe ukuhamba kwamaphepha ahlukile okanye alingisa iphepha lokudluliselwa kweempawu eziqinisekisiweyo. Unokwenza ngokwezifiso yonke imifanekiso, iilogo, ikopi, kunye nemivuzo kwitemplate nganye.
Nje yakho umkhankaso wokuthengisa othumeleyo yakhiwe, ungongeza ngesandla abasebenzisi kwideshibhodi, okanye abasebenzisi ngokukhawuleza ukuba bafumane amakhonkco abo okudlulisa ngeendlela ezininzi:
Ukuhamba ngendlela eyahlukileyo yokuhambisa amakhonkco kubhekisi ngamnye
Via ikhowudi ye-QR yomthumeli ngamnye
Ukuhamba ngenkqubo yokudlulisa efakwe kwiwebhusayithi yakho
Ukunika ingxelo yakho kwi Isixhobo sokuhambisa yenza ukuba ugcine iso elikufutshane ekukhuleni kwenkqubo yakho yokuhambisa ukuze usoloko usazi ukuba ngoobani abaphezulu abathumelayo. Ungafikelela kwidatha yakho ngedeshibhodi okanye uyithumele nge-webhook-ungathumela idatha yakho nangaliphi na ixesha njengefayile ye-CSV.
Ukuhanjiswa kweFektri ngoku kudityaniswa ne- Hubspot kwaye yongeza iSalesforce, i-Intercom, Shopify, yaye WooCommerce nge-API eza kungekudala.
Zama ukuThunyelwa kwiFektri simahla
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa ikhonkco lokudlulisa elakhiwe ngu Isixhobo sokuhambisa kulo lonke eli nqaku.
tags: umzi-mveliso wokudlulisaiphepha lokufika lokuhambisaikhonkco lokuthumelaukuthengisa ukuthunyelwaiqonga lokudluliselaisoftware yokuthumela